उपत्यका सडक विस्तारमा प्राधिकरण र टेलिकम बाधक - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
उपत्यका सडक विस्तारमा प्राधिकरण र टेलिकम बाधक
पुष २७, २०७४ 1430 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
राजधानीको सडक विस्तार समयमै पूरा नहुनुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बाधक देखिएका छन् । सडक विस्तारक्रममा प्राधिकरणले विद्युत्का पोल सार्न ढिला गर्दा समस्या देखिएको हो ।
प्राधिकरणले विद्युत्का पोल समयम नसार्दा टेलिकमले तार व्यवस्थित गर्न नसकेको एक अर्काको दाबी छ । यही कारण काम ढिला भएको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं १ का सूचना अधिकारी सुशील भण्डारीले बताए ।
‘डिभिजन कार्यालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बोधन भएको छैन’, उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सडक विभागले सबै आरोप खेप्नु परेको छ ।’
विद्युत्का पोल नसारेको बाहनामा उता ठेकेदारले ढिला गर्ने वा काम रोक्ने गरेको छ । यसको परिणाम दैनिक आवत–जावत गर्ने सर्वसाधारण यात्रुमा पर्न गएको छ । धुलो धूवाँले पैदलयात्रुले सधैं सास्ती खेप्नु पर्छ ।
सडक विस्तारक्रममा उचित अनुगमन नहुँदा ठेकेदारले निहुँ खोज्ने र लागत बढाउने बाहना पाएका छन् । यसैले लागत नाघ्दा पनि काम पूरा भएको हुँदैन । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले त्रिपुरेश्वर–बूढानीलकण्ठ खण्ड निर्माण तथा विस्तार गर्दै आएको छ ।
डिभिजन १ बाट मात्रै झण्डै ८४ सडक विस्तार भइरहेका छन् । तीमध्ये थोरै मात्र सम्पन्न भएका छन् । अधिकांश सडक ठेकेदारको ढिलासुस्तीले गति लिन सकेको छैन् । ठेक्का लिँदा समय सीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने बाचा भए पनि समयान्तरमा यो लागू हुँदैन ।
विद्युत् पोल र टेलिफोनको तार कारण देखाएर ठेकेदारले पटक–पटक समय थप्न दबाद दिने गरेका छन् । काममा ढिला गर्दा नाफा हुने भएपछि अधिकांश ठाउँमा ठेकेदारले जानेरै काम रोक्ने गरेका उदाहरण छन् ।
विद्युत्, टेलिकम, ढल निर्माण र खानेपानीका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको सूचना अधिकारी भण्डारीको दाबी छ । ‘खानेपानीको पाइप लिक हुँदा पनि काममा कठिनाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा खानेपानी विभागले ध्यानै दिँदैन । यद्यपि, कामको अनुगमनमा भने सडक विभागले पनि जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन ।
‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना सुरु, अब अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न सजिलो हुने
‘इनर्जी को–अपरेसन’ मा समझदारी गर्न बंगलादेशी ऊर्जा मन्त्री आउँदै
युनियन हाइड्रो पावरले साउन १४ बाट स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गर्ने
मनपरी कर्मचारी सरुवा नगर्न मातहतका निकायलाई मन्त्री पुनको निर्देशन
मर्स्याङ्दी-काठमाडौं प्रसारण लाइन ६५ प्रतिशत पूरा,फागुनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य